माधव नेपालले थरथरी काप्दै भने, 'मलाई एमालेसँग डर लागिरहेको छ' - News 88 Post
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूलाई एमालेसँग डर लागिरहेको तथ्य खोल्नुभएको छ ।
एमालेमा लामो समय एकछत्र राज गरी भविश्यवान कार्यकर्तालाई लखेटेर माओवादी जनयुद्धमा धकेल्नुभएका नेपालले एमालेबाट अलग भएपछि पनि सोही पार्टीसँग मात्रै डर रहेको मनको कुरा खोल्नुभएको हो ।
नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भई एमालेबाट आफ्नो पालामा कुस्त मौका पाएका केही ब्यक्तिहरुलाई लिएर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ ।
सो पार्टीको बैधानिककताको बिषयमा अदालतमा बिचाराधिन रहेकै बेला अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग डराई-डराई हिड्नुपरेको बताउनुभयो ।
एमालेमा रहँदा आफूसँगै रहनुभएका सुदुरपश्चिमका नेता भानुभक्त जोशीलाई प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग डर लागेको तथ्य खोल्नुभयो ।
नेकपा एमाले आफूहरुको प्रमुख शत्रु भएको भन्दै नेपालले भन्नुभयो,
‘हामीलाई अरु कसैबाट होइन, एमालेको डर छ ।’ उहाँले आफूहरुको नयाँ यात्रामा एमालेले अवरोध गर्ने र त्यत्ति सजिलै गरिखान नदिने बताउनुभयो ।
औँला उज्याएर प्रदिप ज्ञवालीले भने एमालेलाई संसद छोडेर जा भन्ने प्रचण्ड को हो ?
अनुमोदन नहुँदै एमसीसीअन्तर्गत सवा ५ अर्ब खर्च भइसकेको खुलासा !
July 30, 2021 July 31, 2021 N88
काेराेनाका कारण एमाले नेता यादवको निधन
एमालेको मुद्दाले सत्ता गठबन्धनमा मच्चियाे भाँडभैलो
September 12, 2021 N88